Shina: Fampitandreman’ny Sina Weibo an’ny Deutsche Welle · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2019 14:46 GMT
Noterena “hiseho amin'ny endrika hafa” ny kaonty Sina Weibo ofisialin'ny Deutsche Welle tamin'ny 13 Novambra 2011. Fanasaziana mahazatra fanaon'ny Sina Weibo ny famafana ny kaontin'ny mpiserasera namoaka “lohahevitra saro-pady”. Raha mikiry mbola hijanona ao amin'ny Weibo ilay mpiserasera, dia tsy maintsy manokatra kaonty vaovao izy ary manangona mpanjohy vaovao indray, antsoin'ny mpiserasera Shinoa hoe “fisehoana amin'ny endrika hafa indray (re-incarnation) izany.
Ny hafatra “re-incarnation” (fiverenana indray) avy amin'ny Deutsche Welle dia hoe:
Tsy vitan'ny hoe tsy afaka mahazo “F” [Fanamarihana: marika manondro ny fanamarihana na fanamarinana ny mari-panondroana] isika, fa voatery niseho amin'ny endrika hafa indray eo ambany jadon'ny Sina. Ity angamba no bilaogy madinika ofisialy fandiranovana indrindra teo amin'ny tantaranay. Nilaza hatrany ny Deutshe Welle teo aloha fa tsy ho voasakana eto izahay. Tsy nanao na inona na inona manohitra ny Lalàna Shinoa izahay ary mbola tsy nikasika izay fady napetraky ny Sina. Saingy nanaporofo ny zava-misy fa tsy misy fomba ahafahan'ny olombelona misoroka ny G-spots [Fanamarihana: teboka saro-pady] ao amin'ny Sina. Azo inoana fa manerana ny vatany izany.
Ity manaraka ity dia sariitatra antserasera ao amin'ny g-spots an'ny Sina:
Rehefa tafaverina ny kaontin'ny mpiserasera ao amin'ny DeutsheWelle, dia mahazo mailaka avy amin'ny Sina mitaky azy ireo hanatsahatra ny famoahana hafatra saro-pady sy tsikera an'ny Sina izy ireo.
Naharay hafatra fampitandremana vaovao avy amin'ny tolotra ho an'ny mpanjifan'ny Sina Weibo indray ny Deutshe Welle androany maraina, izay milaza hoe:
Hofafàna ny kaontinao raha mbola manao ny tsy mety ianao.
Na noho ny fihetsiky Deutshe Welle namoaka momba ny rafitra sivana ataon'ny Sina na namoaka ny vaovao momba ny fihetsiketsehana any Guangzhou no anton'ny fampitandremana. Ity ambany ity pikantsary nalaina tamin'ny hafatra:
Mijery anao ny Big brother (Razokiny Be)!
Timor Atsinanana 7 andro izay